जीवन के हो ? जीवनलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ गीतामा | karnalikhabar.com
जीवन के हो ? जीवनलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ गीतामा – karnalikhabar.com
जीवन के हो ? जीवनलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ गीतामा
प्रकाशित मिति :2016-12-26 09:03:17 पुस ११, काठमाडौं । हिन्दुबाद हिन्दु धर्म मात्र नभई यो एक जीवन पद्धति हो । यो विषय अहिले छलफलमा आइरहेको छ । त्यसैले हिन्दुबाद सबै धर्मावलम्बीहरुको साझा दर्शन हो । श्रीमद्भागवत गीता हिन्दूहरूको धर्मग्रन्थका साथै हिन्दुबादको महाकाव्य पनि हो । यसमा भगवान कृष्णले अर्जुनसँग र अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्बादका रूपमा कवितात्मक प्रस्तुती गरिएको छ । यसमा जीवन दर्शन दिइएको छ । सत्य, जगत, जन्म, आत्मा आदिको बारेमा विभिन्न सन्दर्भसँग जोड्दै तत्कालीन समयमा दिइएको दर्शन आजपनि उत्तिकै सन्दर्भिका छ ।
श्रीमद्भागवत गीता हामीले सबैले पढेका हु्रँदैनौ । पढ्ने फुर्सद हुँदैन यो ब्यस्त जीवनका बीचमा भागवत गीताको सारमात्र बुझ्न सकेपनि जीवन दर्शन बुझ्न सजिलो हुने थियो ।
किन व्यर्थमा चिन्ता गर्नुहुन्छ ? कोसँग विना अर्थ डराउनुहुन्छ ? तपाईलाई कसले मार्न सक्छ ? आत्मा न जन्मिन्छ न त मर्छ भगवान गितामा भनिएको छ ।
जे भयो त्यो ठीक भयो, जे भै रहेको छ त्यै ठीकै भै रहेको छ र जे हुनेछ त्यो पनि ठीक हुनेछ । तपाई विगतको पश्चाताप नगर्नुहोस् । भविष्यको चिन्ता पनि नगर्नुहोस् । वर्तमान चलिरहेको छ गीताले यहि भन्छ ।
तपाइएको के गयो र तपाई रोइ रहनु भएको छ ? जन्मिँदा तपाईले के लिएर आउनु भएको थियो जुन तपाई अहिले गुमाउनु भयो ? तपाईले के उत्पत्ति गर्नु भएको थियो जुन नास भयो ? न त तपाई केही लिएर आउनु भएको थियो, जे लिनु भयो त्यो यहीँबाट लिनु भयो । जो दिनु भयो यहीँ नै दिनु भयो । जो लिनु भयो यीनै भगवानबाट लिनु भयो । जे दिनु भयो यीनै भगवानका लागि दिनु भयो ।
खालि हात आउनु भयो र खालि हात नै जानु हुनेछ । जुन चीज आज तपाईको छ त्यो हिजो कसैको थियो र भोलि अरुकै हुनेछ । तपाई यसलाई आफ्नो सम्झेर मग्न हुनु भएको छ । बस् यही खुसी तपाईको दुःखको कारण भएको गितामा उल्लेख गरिएको छ ।
परिवर्तन संसारको नियम हो । जुनलाई तपाई मृत्यु सम्झनु भएको छ त्यकि त जीवन हो । एकछिनमा तपाइ करोडौँको मालिक बन्नु हुन्छ र दोस्रो क्षणमा तपाई गरिब बन्नु हुनेछ । मेरो÷तेरो, सानो÷ठूलो, आफ्नो÷अर्काको, मनबाट मेटाई दिनुहोस्, फेरी सबै तपाईको नै हुनेछ, तपाई सबैको हुनु हुनेछ ।
न यो शरीर तपाइको हो, न तपाई शरीरको । यो अग्नि, जल, वायु, आकाशबाट बनेको हो र यसैमा मिल्न जानेछ । तर आत्म स्थिर छ, फेरी तपाई के हो ?
तपाई आफू आफैलाई भगवानमा समर्पित गर्नुहोस् । यो नै सबैभन्दा उत्तम सहारा हो । जो यसको सारको जान्दछ ऊ डर, चिन्ता, शोकबाट सधैँ मुक्त हुनेछ ।
तपाई जे राम्रो गर्नुहुन्छ, त्यसलाई भगवानमा अर्पण गर्नुहोस् । यस्तो गर्दाखेरि जीवन मुक्तिको आनन्द अनुभव हुनेछ ।
‘रेफर’मार्गमा हिँडेका हामी जिल्लाका डाक्टर